O doro anya na ịzụ ahịa dijitalụ bụ anụ ọhịa dị ike - na otu helluva fickle anụ ọhịa na nke ahụ. Dị ka anyị niile ga-achọ iche na ahịa dijitalụ bụ otu ihe n'agbanyeghị ihe ọ bụla, ọ bụ n'ezie ọ bụghị - na ihe kpatara ya bụ ihe doro anya. Dị ka azụmahịa, ị nwere ike ịhọrọ itinye ụfọdụ pasent nke oge na mmefu ego gị na ụdị ahịa dijitalụ dị iche iche: mgbasa ozi mmekọrịta, PPC, retargeting, ahịa vidiyo, ahịa e-mail, SEO, njikarịcha ngwa ọrụ webụsaịtị na ihe ndị ọzọ.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị karị ịhụ bụ ụzọ ọrụ dị iche iche si ebute ụzọ azụmaahịa dijitalụ ha. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ dị iche iche ga-enweta ebumnuche azụmahịa dị iche iche, naanị ụfọdụ ngwaọrụ na nyiwe nwere ike nweta nsonaazụ ndị ahụ ga-abụ nke a ma ama. Ọ na-atọkarị ụtọ ịhụ ka ụlọ ọrụ dị iche iche na-eweta onwe ha n'ịntanetị yana otu ha si ewepụta onwe ha maka ndị ahịa na atụmanya.
N'ime oge ọrụ m, ahụrụ m ọtụtụ ndị ahịa azụmaahịa n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche. N'oge m zutere, Amụtawo m nnukwu ego banyere ahịa ụzọ ha na-eji emezu ebumnuche ha. Dika aturu anya, otutu uzo eji eme ihe bu ndi oru ndia - ma ee, ha enweela ihe ịga nke oma. Y’oburu n’inwe ahia n’ime ulo oru ise n’okpuru, ichoro igu akwukwo. Nke a bụ ndụmọdụ ndụmọdụ dijitalụ dị irè nke 3 dị iche iche:
Industrylọ Ọrụ Ahụike
Aka ala, otu n'ime ọrụ aghụghọ dị aghụghọ iji zụọ ahịa bụ ụlọ ọrụ ahụike. Isi ihe kpatara nke a bụ na ị nweghị ike iji nkwuwa okwu kwuo dị ka "ọgwụgwọ a ga-agwọ gị ọrịa gị." N'ọtụtụ oge, ị nwere ike ịkọ naanị ihe akaebe na nke a enyerela ọtụtụ mmadụ aka (Ex: "ọgwụgwọ a dị 98%"), ma ọ bụ na ọ nwere ike inyere aka. N'ụzọ doro anya, nke a bụ nsogbu gbasara iwu 100%.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọbụlagodi njide ndị na-abịa site na imepụta ozi izi ozi akwadoro, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ ndị ọzọ ka nwere nnukwu ohere (yana izuzu zuru oke) iji "gbalịsie ike ihe ha." Otu ụzọ kachasị mma iji mee nke a n'ụlọ ọrụ ahụike bụ ime ka ndị na-ahazi gị were humani ma gosipụta na ị hụrụ ya n'anya. Nlekọta ahụike bụ okwu dị oke mkpa; ya mere, gịnị ma ị gafee njem ndị ọzọ iji gosipụta na ndị ahịa gị (ma ọ bụ ndị ọrịa, kama nke ahụ) bụ maka ọdịmma gị.
Ọ bụ ezie na nzukọ gị kwesịrị igosipụta ụkpụrụ omume mmekọrịta ndị a na weebụsaịtị ha na azụmaahịa azụmaahịa ndị ọzọ, usoro mgbasa ozi bụ ụzọ dị mfe iji nweta ozi ndị ahụ nke ilebara ndị ọrịa ọhụrụ na ndị ugbu a anya. Yana ọkọlọtọ ndozi ọkwa (Ex: a ga-emechi ụlọ ọrụ a maka owuwu. Ma ọ bụ Dr. Williams anaghị anọ n'ọfịs), onye na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta gị nwere ike ịga njem ọzọ ma kesaa isiokwu gbasara ahụike n'oge oge oyi, ma ọ bụ na-enye ndụmọdụ niile n'ihi na ị gbasiri ike na mmemme dị na mpaghara (Ọpụ: Makingme mkpebi ndị dị mma karị na Ọchịchị Ọchịchị) Ọbụna ịkekọrịta foto ndị dị mma nwere ike ime ka ndị ọrịa nwee ahụ iru ala na akara gị - dị ka foto nke ndị uwe ojii na-ahapụ onyinye maka ndị ọrụ nọọsụ n'oge ezumike izu ụka BIG. Ọ bụ obere ihe ga-eme ka ọgbakọ gị dị iche na ndị ọzọ. Nkasi obi bụ # 1 na-enwe mmetụta ndị ọrịa chọrọ inwe mmetụta mgbe ha na-achọ dọkịta na-elekọta ahụike ma ọ bụ na-ekpebi ebe ha ga-eme ịwa ahụ.
Dị ka ụlọ ọrụ ahụike, ụlọ ọrụ ụgbọ ala na-asọ mpi… ma eleghị anya ọbụna na-asọmpi. Ndị mmadụ nwere mmasị nke ụlọ ọgwụ na ụlọọgwụ ha chọrọ ịga, mana mgbe nrụgide bịara, ọ bụrụ na ịnwee ihe mberede, ị ga-ebu ụzọ gaa ụlọ ọgwụ kacha nso. Lọọgwụ ga - abụkarị oghe - mana ụfọdụ ga - eme nke ọma karịa, ma nwee aha ka mma karịa ndị ọzọ.
Otú ọ dị, n'oge a, ụlọ ọrụ ụgbọ ala dị nnọọ ka ọnụnọ ya n'ịntanetị. Ebe ọ bụ na ụgbọ ala bụ nnukwu ego, ndị ahịa na-eme nyocha dị n'ịntanetị dịka o kwere mee mmadụ - nke gunyere ịgagharị weebụsaịtị gị site n'elu ruo ala. Nke ahụ kwuru, ọ bụrụ n'ịchọrọ ijide n'aka na ndị ahịa gị na-etinye aka na weebụsaịtị gị n'oge njem ịzụta ụgbọ ala ha, ọ dị mkpa ka ị leba anya na azụmaahịa ụgbọ ala gị n'ịntanetị; ma debe ngwa ahịa gị na nkwalite gị ugbu a. Ndị mmadụ enweghị oge iji kpọọ ndị ahịa gị ma jụọ ma ọ bụrụ na ihe ka dị ma ọ bụ nkwalite ka na-aga. Ọ bụrụ na ihe dị na weebụsaịtị gị, ndị na-azụ ahịa na-atụ anya na ọ ga-adị na nza. Ọzọkwa, ndị na-azụ ahịa chọrọ inwe ike ịchọpụta ihe niile dị ugbu a na ụlọ ngosi gị. Mgbe ndị na-azụ ahịa hụrụ ụgbọ ha nwere mmasị na ntanetị, ohere dị mma nke ga-aga na nhọrọ ụgbọ ala ha kacha elu 3; yabụ gbaa mbọ hụ na saịtị gị adaghị n’azụ.
Industrylọ oriri na ọụtaụ Restaurant
Nke ikpeazu, ma dichaa ndi ulo oru kachasi egwu m ga-ekwu okwu banyere ya bu ebe a na ere nri! Ihe mere m ji kwuo "ihe ịma aka" bụ n'ihi oke nlezianya achọrọ iji nyochaa nyocha niile nke ịntanetị, nkọwa na mkpesa na-abịa site n'aka ndị na-eri ihe na ụdị mmetụta uche niile. Dị ka ị maara, a na-edozi ngwa ngwa na nke ọma karịa otu ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ọ ka mma maka aha ha na ntanetị na offline. Maka otu esi adighi mfe ịza nzaghachi na ntanetị, ụlọ nri kwesịrị ịgbalịsi ike ịzaghachi nye nkọwa ọ bụla mgbe ọ bụla o kwere omume - nke ọma ma ọ bụ nke ọjọọ! Ọzọkwa, obere ihe na-aga ogologo oge iji mee ka mmadụ ghọọ onye ahịa maka ndụ.
Mgbasa ozi mgbasa ozi dịka Facebook na-enye ndị ọrụ ohere ịkọ ndị otu ọnụahịa, yana ịhapụ nyocha. Ọ bụrụ na ị bụ ndị na-elekọta peeji, ị ga-enweta amamọkwa ozugbo mgbe mmadụ hapụrụ nyocha na ibe gị. Leavehapụ echiche dị mma na ha, ihe kachasị dị mma ma nwee nsọpụrụ iji mee bụ ịzaghachi ha n'ime awa 24 - ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ bụ nyocha adịghị mma. Mgbe ndị na-azụ ahịa nọ n'oké okpomọkụ nke oge a, ha chọrọ ka edozi ihe ASAP.
Ọ bụrụ na ị na-azaghachi nyocha na-adịghị mma, lee otu ị ga - esi mee ihe ka mma. Ọ bụrụ na ọ bụ ntụle dị mma, wepụta oge kelee ha n'ime otu oge ahụ. Ọ bụghị naanị na ndị ọrụ na-ahụ nyocha ndị ahịa gị, mana ha na-ahụkwa otu ị si edozi ha. Na agbanyeghị ma nyocha ahụ dị njọ ma ọ bụ na ọ bụghị, otu ị si egosipụta onwe gị n’aka onye ahịa pụtara ọdịiche dị n’etiti ụlọ juru eju nke ndị folks na-eche tebụl; na onye ahịa kwa awa 2. Ọkachamara bụ ihe niile! A na-anabatakwa ndị na-eri nri n'ụlọ oriri na ọ toụ toụ ndị na-eri nri na saịtị nyocha ndị ọzọ dịka Yelp na Urbanspoon.
Ọ bụ eziokwu na akụkụ dị iche iche nke ịzụ ahịa dijitalụ nwere ike iji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nzukọ, ụdị usoro ntanetị dijitalụ na usoro eji eme ihe dị iche iche dabere na ụlọ ọrụ. Ihe a na-ahụta dị oke mkpa na otu ụlọ ọrụ nwere ike ọ gaghị enwe isi nke ọzọ. Industrieslọ ọrụ dị iche iche nwere ebumnuche dị iche iche, yabụ, ụzọ dị iche iche isi ere ahịa na ndị na-azụ ahịa na ntanetị.
Tags: ahia akpakanamdedigital marketingahịa dijitalụ ụlọ ọrụahia ụlọ ọrụahịa ọgwụụlọ ahịa ụlọ ahịaChọọ Marketingelekọta mmadụ mediaSocial Media Marketing
Ihe mmuta 12 sitere na oke nwe ya na ahia
Jul 15, 2016 na 4: 05 AM
Nke a gosiputara na ahia dijitalụ abughi nani okwu dị warara kamakwa nke buru ibu ma na-agbanwe agbanwe. Teknụzụ ahịa ahịa dijitalụ na-akọwapụta ikuku nke ụwa ahịa. Ndị ọrụ ahụike, ụgbọ ala na ụlọ ọrụ nri bụ ole na ole n'ime ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eduga n'ụwa. Site na nke a, enwere m ike ikwenye na azụmaahịa dijitalụ ewerewo ọkwa ọhụrụ.